Kazkahstan: Ny Fitantanan-draharaham-Panjakana Resahan’ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 16:55 GMT
(Fanamarhana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2009)
Ezahan'ireo bilaogera ny hahatakatra izay miseho eo amin'ny fireneny sy izay fomba hampety ny fitantanan-draharaham-panjakàna ao Kazakhstan.
Megakhuimyak misaintsaina ny hoavin'ireo sangany ara-politika, amin'ny fanoritsoritana ireo fironana ao amin'ny fanabeazana azy ireo [ru]:
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20 sy ny faramparan'ny andiantaona 1970, tany Rosia no nianatra ireo sangany tao Kazakhstan, indrindra fa tao Maosko. Avy eo, tany amin'ny fiandohan'ny andiantaona 1990, tany Tiorkia ireo Tanora no nianatra. Nanomboka ny 1998, lasa nalaza ny fandehanana nianatra tany Eoropa sy Etazonia. Miandry aho hoe ato anatin'ny 5-10 taona monja, dia ho ao anatin'ny lohalaharan'ireo manampahefana ao Kazakhstan ry zareo nahazo diplaoma tany Harvard sy ireo anjerimanontolo Tandrefana hafa, izay ny hiafaràny dia tsy maintsy hisy fiantraikany aoriana kely ao.
Manao jery todika i Thousand-pa sady manamarika hoe [ru]:
Taorian'ny 19 taona nitondran'ny filoha Nazarbayev, azo atao ny manao famintinana hoe nahomby ihany izy tamin'ny fametrahana ny kilasinà kapitalista goavana. Mbola sarotra kokoa ny toedraharaha ho an'ireo kilasy antonony. Ary raha momba ny fahantrana, mbola misy izy io toy izay efa nisy nandritry ny 19 taona lasa, saingy any amin'ireo tanàna kelikely sy faritra ambanivohitra no tena, azo eritreretina, nitombo be lavitra noho izay efa nisy [talohan'ny fahaleovantena].
Zendana i Sadenova hoe mbola marintoerana ihany ny rafitra misy governemanta na eo aza ny faharatsian'ny fitantanan-draharahany [ru]:
Tsy mampino ity firenentsika ity. Firenen'ireo tsy matianina / tia andrakandrana. Na aiza na aiza alehanao dia ahitànao “fitantanana mpiasa” mampivarahontsana. Ara-teknika ny firenena tahaka izany dia heverina hitsingaona, saingy noho ny antony samihafa dia tsy tratr'izany izy ity…
[Raha mampitandrina ireo mpahay toekarena erantany hoe mety mbola ho avy ny ampahany faharoa amin'ny krizy] ireo manampahefana ao Kazakhstan efa miady hevitra sahady momba ny “fampandrosoana mitondra fanavaozana” aorian'ny krizy. Fa tena azo inoana, ao Kazakhstan, na ny krizy aza dia manana endrika nasionaly manokana! Saingy misy namako iray manazava ambangovangony ny niavian'io fomba fijery miabo io: “Niakatra kely ny vidin'ny solika, ary ireny olona ireny dia mahatsapa ho maivamaivana kokoa, afa-patorana sy nisotrosotro whisky kely”.
Navoaka ihany koa tao amin'ny neweurasia.